मोबाइल मार्केटि toको लागि छुट्टी गाइड Martech Zone
कालो शुक्रवार शुक्रवार यहाँ छ र % 55% उपभोक्ताहरू उनीहरूको स्मार्टफोनमा किनमेल अनुप्रयोग प्रयोग गर्छन् हरेक हप्ता! हामीले पहिले नै छुट्टी शपिंग र मोबाइलमा केहि इन्फोग्राफिक्स साझेदारी गरेका छौं किन तपाईंको व्यवसाय छुट्टीको लागि मोबाइल-तैयार हुनुपर्दछ र मोबाइल वाणिज्यको उदय, र बजारहरूलाई लाभ.
बाट यो इन्फोग्राफिक निलो चिप मार्केटिंग ती मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले खोजिरहेका रणनीतिहरूको किसिमको डाटा प्रदान गर्दछ। स्थान, दिनको समय बुझेर, तपाईंको प्रयोगकर्ताको डेमोग्राफिक्सले काफी मोबाइल खरीदहरू ड्राइभ गर्न मद्दत गर्दछ। र खरीद सिफारिस गर्न एक साधन प्रदान गर्न र शपिंग सूची निर्माण गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ!
टैग: अनुप्रयोग प्रयोगकुपन अनुप्रयोगहरूमोबाइल अनुप्रयोगहरूमोबाइल वाणिज्यमोबाइल कूपनमोबाइल पोष्टहरूमोबाइल किनमेलकिनमेल सूचीस्मार्टफोनट्याब्लेट